Adobe Acrobat DC waxay u timid inay dib u saxeexdo faylasha PDF | Abuurista khadka tooska ah
Adobe wuxuu ku dhawaaqay Acrobat DC cusub si dib loogu qeexo waxa ay yihiin PDF-yada
Maanta waa maalintii taas Adobe ayaa ku dhawaaqday Adobe Acrobat DC cusub. Maxay noqon laheyd xarunta dhexe ee dukumiintiyada iyo isku xirnaanta barnaamijyada kala duwan ee qalabka mobilada. Fikradda shirkaddan u heellan inay naqshadeyso dhinacyo kala duwan, ayaa ah in dadka isticmaala ay abuuri karaan, la wadaagi karaan oo ay la falgeli karaan faylasha PDF-ka qalab kasta.
Sow taasi maahan kaalay wax cusub sheeg, maaddaama shaqadani ka timid qalab kasta oo aan ahayn wax cusub, laakiin waxaan ku aragnay xalal badan oo kala duwan iyo barnaamijyo. Mid ka mid ah sheekooyinka cusub ayaa ah adeeg cusub oo loogu talagalay dib u eegista dukumintiga iyo wax ka beddelka kiniinka.
Adobe Sensei sidoo kale wuxuu ciyaarayaa, tikniyoolajiyadda sirdoonka macmalka ah ee aan horey u ogaanay dhowr bilood kahor taasina waxay la imaaneysaa hadafka ah qalabaynta howlahaas soo noqnoqda. Macaamiisha Acrobat DC iyo Adobe CC ayaa noqon doona kuwa adeegsan kara xarunta si ay ugu saxiixaan dukumiintiyada Adobe Sign.
In kasta oo mid ka mid ah shaqooyinka ugu awooda badan Acrobat DC-da cusub ay noqon doonto ficil wadaaga iyaga. Taasi waa, waxaad si dhakhso leh ula wadaagi kartaa faylasha PDF, samee a raad raac yaa arkay ama dooro isticmaaleyaasha aan dooneyno inaan awoodno inaan aragno waxa ku jira PDF-yadaas.
Sidoo kale naqshadda barnaamijka lafteeda lama dayacin, labadaba boggeeda iyo noocyadiisa moobaylka. Waxay noqon doontaa muuqaalka guriga midka keega qaata oo leh naqshad cusub. Marka laga hadlayo mobilka, noocyada cusub ee Acrobat Reader iyo Adobe Scan app ayaa imanaya, markaa waxaad aadi kartaa dukaamada iOS iyo Android si aad u cusbooneysiiso.
Astaamaha kale ee cusub ee Adobe Acrobat ayaa ah iskaanka kaararka ganacsiga luqado badan, awoodda lagu buuxiyo foomamka aqoonsiga, taabashada tafatirka PDS ee kiniiniyada iyo saxiixa meel kasta. Xusuusnow in qalabka Acrobat DC-kan cusub loogu talagalay kuwa ku leh rukunka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Adobe wuxuu ku dhawaaqay Acrobat DC cusub si dib loogu qeexo waxa ay yihiin PDF-yada
Sawir gacmeed Carlos Ezquerra, oo ah wada-qoraha garsoore Dredd, ayaa naga tagaya
Wacom waxay u dabaaldegeysaa sanad-guuradii 35aad iyada oo qiimo dhimis ballaaran lagu sameeyay